Weerar Gaadiid looga Gubay Ciidamo Mareykan iyo Soomaali Ah Oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Balcad.
Friday November 10, 2017 - 14:07:14 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ka dhashay weerar dhabagal ah oo Ciidamo Mareykan iyo Soomaali ah lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Sh/dhexe.
Wararka ka imaanaya wadada xiriirisa degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayaa sheegaya in weerar dhabagal ah loo dhigay ciidamo Caddaan Mareykan ah iyo Maleeshiyaad katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya.
Xoogag katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa wadada ugalay ciidamada huwanta ah oo kasoo amba baxay deegaanka Basra kunasii jeeday Balcad, goob joogayaal ayaa sheegaya in weerarka lagu gubay laba gaari oo mid ahaa Taaw midka kalane uu ahaa BG ay la socdeen maleeshiyaadka DF-ka.
Rasaas xooggan oo lays dhaafnayay ayaa laga maqlayay dhulka howdka ah ee lagu dagaallamayay kadibna waxaa xigay qaraxyo is xigxigay oo lala eeganayay gaadiidka ciidamada huwanta ah, goob joogayaal waaxay sheegeen in ay arkeen gaadiid ku gubanaya wadada hareeraheeda.
Khasaara dhimasho iyo dhaawac ah ayaa la sheegay in ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaalida uu kasoo gaaray dagaalkii ka dhacay wadada xiriirisa degmada Balcad iyo deegaanka Basra, ciidamada Al Shabaab ayaa gantaallada Garbaha laga gemo lahelay gaariga BG-ga oo ay la socdeen ciidamo katirsan Melleteriga DF-ka halka miino dhulka lagu aasay ay burburiyeen gaari nuucaa gaashaaman ah oo ay la socdeen ciidamo caddaan ah.
Ciidamo isugu jira AMISOM iyo kuwa Soomaali ah ayaa isbuucii lasoo dhaafay dhaq dhaqaaqyo melleteri ka sameeyay deegaannada kala qeybiya gobollada Sh.dhex iyo sh/hoose waxaana muuqata in iska caabin adag ay kala kulmayaan xoogaga Al Shabaab.